Vita sonia, omaly teny Alarobia ny fiaraha-miasa eo amin’ny Ceni sy ny TVM/RNM, amin’ny fahafahan’ny mpikarakara fifidianana manao fandaharana maimaim-poana amin’ireo haino aman-jerim-panjakana. Tafiditra ao anatin’izany ireo hetsika fanentanana samihafa momba ny fifidianana. « Hanatsarana ny fomba fanabeazana ny mpifidy izany… Ilaina ny fanakianana ary tsy mora ny manao zavatra », hoy ny filohan’ny Ceni, ny Me Rakotomanana Hery taorian’ny fanaovan-tsonia teo aminy sy ny minisitry ny Fifandraisana, Andrianjato Vonison.
Efa mizotra ny fikarakarana lisi-pifidianana, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny Ceni. « Na tsy misy fifidianana aza amin’ity taona ity, efa fanao izany. Ahitana fiovana ny lisitra satria eo ireo tonga taona. Eo koa ireo mifindra toerana… Manana 20 andro aorian’ny 31 janoary nifaran’ny lisi-pifidianana ireo manana fanamarihana », hoy ny Me Rakotomanana Hery. Notsiahiviny fa mikatona tanteraka izany amin’ny volana avrily izao ary misokatra indray amin’ny volana desambra.
Nohazavain’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, omaly teny Tsimbazaza, ny anjara toeran’ny Antenimierandoholona, hijoro tsy ho ela. « Andraikitry ny antenimiera roa tonta ny fandinihana ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna. Tompon’ny teny farany anefa ny ety Tsimbazaza raha miseho ny tsy fitovian-kevitra », hoy izy. Nambarany fa tokony hodinihina haingana ny lalàna momba ny fampihavanana sy ny sata hifehy ny serasera sy ny fifandraisana.
Tafaverina an-tanindrazana, omaly, ny delegasion’ny Antenimierampirenena, notarihin’ny filohany, Rakotomamonjy Jean-Max, rehefa avy any Cambodge. Anisan’ny voaresaka ny handraisana ny fivorian’ny parlemanteran’ny frankofonia eto amintsika. « Efa vonona ny fotodrafitrasa handraisana izany. Noresahina tamin’ireo parlemanteran-dry zareo koa ny fiaraha-miasa sy ny fametrahana fitoniana eto amintsika », hoy Rakotomamonjy.